လူသားအားလုံးအတွက်: အင်တာနက် မင်းသမီး မဖြစ်ရအောင်
Subject: အမျိုးကောင်းသမီးများသို့ အင်တာနက် မင်းသမီး မဖြစ်ရအောင် ကာကွယ်ဆေး အခုခေတ်မှာ လူတိုင်းနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေပြီဖြစ်တဲ့ အင်တာနက်ရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကတော့ ဖော်ပြလို့ မကုန်နှိုင်အောင်များတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အင်တာနက် နည်းပညာတိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလဲ မခွဲမခွာ တွဲပါလာတာကိုလဲ မြင်နေရပြန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ အဆင့်အလှမ်းကွာနေတဲ့ spyware,mailware,virus စတာတွေကို မပြောလိုပါဘူး။ ကျွန်တော့မျက်စိထဲ ကန့်လန့်ဝင်နေတဲ့ အကြောင်းအရာက အမျိုးကောင်းသမီး တွေရဲ့ ဘာညာကိစ္စ ဓါတ်ပုံ/ဗီဒီယို များစွာကို ကာယကံရှင်မသိပဲ အင်တာနက်ပေါ်မှာ စေတနာကြီးမားစွာနဲ့ ဝေငှ(share) အလုပ်ခံနေရတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒါကို ဒီအတိုင်းထိုင်ကြည့်နေလို့တော့ မဖြစ်တော့ဘူးထင်ပါတယ်။ နာမည်ကြီးချင်လို့၊လူသိများချင်လို့ (ဒါမှမဟုတ်) ၀ါသနာအရ ကိုယ့်ပုံကိုယ်တင်တာဆိုရင်တော့ လုပ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့လဲ ကြည့်ရှုအားပေးပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ဆို ရိုးရိုးသားသား နေတာကို ချောင်းရိုက်ခံရတာတို့၊ ကိုယ့်ချစ်ချစ်နဲ့ လွပ်လွပ်လပ်လပ်နေတာကို မှတ်တမ်းတင်ခံရတာတို့ကတော့ မဖြစ်သင့်ပါ။ အဆိုးဝါးဆုံးကတော့ ကိုယ့်ချစ်သူကို ယုံမှတ်လို့ ပုံအပ်မိကာမှပဲ ကျောချမှ ဓါးပြမှန်းသိရတဲ့ကိစ္စပါ။ ကိုယ့်ချစ်သူကကို ဖော်ကောင်လုပ်ပြီး အင်တာနက်ပေါ် တင်ပေးတာပါ။ ဒီကိစ္စကို အမျိုးသမီးများ ကျပ်ကျပ် သတိထားစေချင်တယ်။ တချို့ဆို ဒီကိစ္စကြောင့် အလုပ်အကိုင်ထိခိုက်၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မျက်နှာမပြရဲအောင် ဖြစ်ရပါတယ်။ ဒါတွေရဲ့ အရင်းခံကတော့ မသိနားမလည်မှု၊ နည်းပညာ မကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်ဆိုတာ တွေ့နေရပါတယ်။အမျိုးကောင်းသမီးများအနေနဲ့ ဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေက ရှောင်လွဲနှိုင်အောင် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ပေးချင်တယ်။
ကျွန်တော်က ကွန်ပျူတာသင်တန်းဆရာ တစ်ယောက်ပါ။ ပြီးတော့ ပညာရှင်အဆင့် ဓါတ်ပုံ၊ဗီဒီယို ၇ိုက်ကူးသူ တစ်ယောက်ပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ပေးတဲ့နည်းလမ်းတွေက အမတို့ ညီမတို့ အရှက်နဲ့ သိက္ခာကို တတ်နှိုင်သလောက် ကာကွယ်ပေးနှိုင်မယ်လို့လဲ ထင်ပါတယ်။
၁။ ဘယ်သူ့ကိုမျှ မယုံပါနဲ့
ဘယ်လောက်ပဲ ချစ်ချစ် ၊ ဘယ်လောက်ပဲ ရင်းနှီးနှီး လွပ်လွပ်လပ်လပ် နေတာကို မှတ်တမ်းတင် မခံပါနဲ့ ။ သူကိုယ်တိုင်က စိတ်ချရသော်လဲ သူ့ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ပဲ သူဆီက ကိုယ့် ဓါတ်ပုံကို သူများခိုးသွားတာမျိုး ခံရတတ်ပါတယ်။
၂။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လဲ မှတ်တမ်း မတင်ပါနဲ့
ကိုယ့် ကိုယ်လုံး ဘယ်လောက်လှသလဲ သိချင်ရင် မှန်ထဲမှာ ပဲ စိတ်တိုင်းကျ ကြည့်ပါခင်ဗျာ။ ဓါတ်ပုံရိုက် မကြည့်ပါနဲ့ ။ အဲဒါလဲ အွန်လိုင်း မင်းသမီးဖြစ်ဖို့ လမ်းစပါ။
၃။ကင်မရာထဲမှာ ၊ ကွန်ပျူတာထဲမှာ ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ(delete)ဆိုတိုင်း လဲ စိတ်မချပါနဲ့
ကင်မရာထဲမှာ ၊ ကွန်ပျူတာ ထဲမှာ ဖျက်လိုက်ပြီဆိုတိုင်းလဲ စိတ်ချရတာ မဟုတ်ပါ။ အစွမ်းထက်သော recovery software မြောက်များစွာရှိနေပါတယ်။ အဲဒီ့ဆော့ဝဲတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ် ၊ နှစ်နှစ်လောက်က ဖျက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံ ဗီဒီယို တွေကို အလွယ်တကူ ပြန်လည်ရှာပေးနှိုင်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာပြင်ဆရာတိုင်းလိုလို လုပ်တတ်ပါတယ်။ ကို့ကင်မရာနဲ့ စိတ်ကြိုက်ရိုက်ကြည့်တယ် ။ ပြီးတော့ ဖျက်ပစ်လိုက်တယ် ဆိုပေမယ့် သာမန်ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဟာ ဒါတွေကို အလွယ်တကူ ပြန်လည်ရယူနှိုင်တာကို လုံးဝ မမေ့ပါနဲ့။
၄။ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာ နဲ့သုံးရင်လဲ သတိထားပါ။
အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ကိုယ့်လက်တော့ နဲ့သုံးရင် ကိုယ့်လက်တော့ထဲက အချက်အလက်ကို အင်တာနက်ဆိုင်က အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု ကော်ပီကူးထားနှိုင်တယ်ဆိုတာ သိထားပါ။အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ ဆိုင်မှာ ရှိတဲ့ကွန်ပျူတာတွေကို ကောင်တာက အလွယ်တကူထိမ်းချုပ်နှိုင်အောင် network စနစ်တစ်မျိုး ချိတ်ဆက်ထားတတ်ပါတယ်။ကိုယ်က အဲဒီဆိုင်မှာ အင်တာနက် သုံးတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကလဲ အဲဒီစနစ်ထဲကို အလိုလို ရောက်သွားပါတယ်။ဒါဆိုရင် အင်တာနက်ဆိုင်ကောင်တာကနေ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကို နက်ဝါ့ကနေ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနှိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်တာနက်ဆိုင်မှာဆိုင်မှာသုံးမယ့် ကိုယ့်လက်တော့မှာ အရေးကြီးတဲ့ ကိုယ့်ပုံတွေ ထည့်မထားပါနဲ့။
၅။ နည်းပညာကို အထင်မသေးပါနဲ့
ကိုယ့်လက်တော့ထဲမှာ ပုံတွေထည့်မထားပါနဲ့. မလုံခြုံပါဘူးဆိုတော့ နဲနဲနားလည်တဲ့ ကိုကိုမမတွေက share ပေးမထားရင်ရပါတယ်လို့ ဆိုကြတယ် ၊ ဟုတ်ကဲ့ နည်းပညာကို အထင်မသေးပါနဲ့ခင်ဗျား ၊ ကိုယ့်ထက်ပိုတော်တဲ့ ဆရာကြီးတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတာလဲ မေ့မထားပါနဲ့။cracker တို့ hacker တို့ဆိုတာ အလကားပေးထားတဲ့ နာမည်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်က ပြောမယုံ ကြုံဖူးမှသိလောက်အောင် မြင့်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘက်က စိတ်ချရအောင် သတိရှိတာ အကောင်းဆုံးပါ။
၆။အင်တာနက်မှာ တွေ့တဲ့သူကို မယုံပါနဲ့
အင်တာနက်က တော်ကီ ကိုကိုတို့ကပဲ အပြောကောင်းသလား၊အွန်လိုင်းမမတွေကပဲ အညှာလွယ်သလားမသိပါ။ vzo chat လို ဟာမျိုးနဲ့ ချွတ်ပြ၊ လှန်ပြတဲ့ မမတွေ ၊ ညီမတွေ ရဲ့ပုံ များ အင်တာနက်ပေါ်မှာ တွေ့နေရပါတယ်။(ကျွန်တော် အသုံးရိုင်းသွားရင် ခွင့်လွှတ်ပါ) ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတာက ပါးကွက်ကျားနဲ့ ထမီနဲ့ ဗမာမလို့ ထင်းခနဲသိသာတဲ့ ပုံတွေပါ အများကြီးပါလာတာပါ။ ကြေးစားတွေပါလို့ ပြောရအောင်လဲ အိမ်မှာ ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်လိုင်းနဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာနဲ့ သုံးနှိုင်တဲ့အဆင့်က ကြေးစားမဟုတ်နှိုင်ပါ။ ဖြစ်နှိုင်ခြေရှိတာက အွန်လိုင်းကိုကိုကလဲ အပြောကောင်း၊ညီမလေးတို့ကလဲ သဒ္ဓါလွန်တယ်ထင်ပါတယ်။ မယုံကြပါနဲ့ ညီမလေးတို့ရယ်။ ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်တဲ့သူဆိုတာ နှစ်ယောက်ချင်း ဆိတ်ကွယ်ရာမှာ မှားချင်မှားမယ် ၊ အဲဒီလို ဗြောင်ကြီးတော့ မတောင်းဆိုပါဘူး။ အဲ ….. ကိုယ့်သိက္ခာကို ရင်းရဲတယ်ဆိုရင်တော့ လုပ်ပေါ့။(vzo က အရုပ်တွေ အသံတွေ မှတ်ထားလို့ ရတယ်ဆိုတာလဲ သတိရပါ။)
၇။ခိုးအရိုက်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ …….
ခိုးအရိုက်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်ဖို့ ဆိုရင် ကိုယ်မရင်းနှီး မကျွမ်းဝင်တဲ့နေရာမှာ (ဟ်ာတယ်၊တည်းခိုခန်း၊ပန်းခြံ) စတဲ့နေရာတွေမှာ လွပ်လွပ်လပ်လပ် မနေပါနဲ့ ။သတိရှိပါ။
ကင်မရာတွေ အကြောက်ဆုံး ၊ အားနည်းချက်တစ်ခုကတော့ အမှောင်ပါ ။ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ ကင်မရာမဆို အလင်းရောင်အားနည်းသောနေရာမှာ အဆင်မပြေနှိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် စိတ်မချရသော နေရာများတွင် လွပ်လွပ်လပ်လပ် (ဥပမာ အ၀တ်အစားလဲတာ)နေရတော့မယ်ဆိုရင် လုံးဝ မှောင်သွားအောင်လုပ်ပါ။ ဒါဆို ကင်မရာတွေ မတတ်နှိုင်တော့ပါ။ အမှောင်ထဲမှာ ရိုက်နှိုင်တယ်ဆိုတဲ့ (night shot)ဆိုတဲ့ ကင်မရာတွေတောင် အနဲဆုံး အနီရောင် ရောင်စဉ်လေး လင်းမှ အလုပ်ဖြစ်တာပါ။
၈။spy camera တွေကို တတ်နှိုင်သမျှ ရှာပါ
အခုခေတ်မှာ သုံးသောင်းလောက်ဆို spy camera တစ်လုံး ရနှိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်မချရတဲ့ နေရာတွေမှာဆို spy camera တတ်ထားမထား တတ်နှိုင်သလောက် ရှာပါ။ ဒါ ကိုကိုတွေ ၊ ဦးဦးတွေ အတွက်လဲ အရေးကြီးပါတယ်။ တော်ကြာ ကိုယ်တောင်မသိပဲ နာမည်ကြီး အွန်လိုင်းမင်းသား ဖြစ်သွားနှိုင်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် ကင်မရာတွေကို မြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်ရအောင် ဒေါင့်တွေမှာ တတ်ထားတတ်ပါတယ်။ သေသေချာချာရှာပါ။ အခန်းအပြင်မှာတတ်ထားပြီး မတ်စေ့လောက်အခန်းကို ဖောက်ထားတာမျိုးလဲ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ မသင်္ကာဖွယ်ရာ အပေါက်တွေကို ဒေါင့်တွေ မျက်နှာကျက်တွေမှာ သေချာရှာပါ။ဘာမှမတွေ့ဘူးဆိုပြီးလဲ စိတ်ချမနေပါနဲ့ ၊ လိုအပ်ရင် အမှောင်ကို အကာအကွယ်ယူပါ။
အဲ super market တွေက အ၀တ်လဲခန်းတွေမှာလဲ ရှိတတ်တယ်နော် ။ လုံခြုံရေးအတွက်တတ်ရတာပါဆိုပဲ ။
၉။ ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အွန်လိုင်း မင်းသား မင်းသမီး ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ရော
ရှက်ပြီး ငြိမ်မနေပါနဲ့ ၊ သိပ်မပျံ့သေးမှီ တားဆီးပါ။ sex ၀က်ဆိုက်တော်တော်များများဟာ user က တောင်းဆိုလို့ရှိရင် အချက်အလက်တွေ ဖျက်ပေးပါတယ်။ ကို့ပုံ ပါနေတာ သေချာရင် အဲဒီဝက်ဆိုက်ကို အကြောင်းကြားပြီး ဖျက်ခိုင်းပါ။ အဲဒီလို အကြောင်းကြားလို့ ဖျက်ပေးတာ သုံးခါ လေးခါတွေ့ဖူးပါတယ်။
တွေ့ဖူးပါတယ်။ အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီး တွဲရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေမှာ အမျိုးသားကိုယ်တိုင်က တင်တာဆိုတော့ သူုမျက်နှာတော့ သူဖျက်ထားတာတွေ့ဖူးတယ်။ ဒါ ကိုယ်ချင်းမစာတာပါ။ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ထက်ပိုရှက်တတ်တာပေါ့။ ကိုတောင် ရှက်တတ်သေးရင် သူများအရှက်ကွဲ အကျိုးနဲဖြစ်အောင် မလုပ်သင့်ပါဘူး ။ ဒါ စေတနာဗလဗွနဲ့ မျှဝေတတ်တဲ့ ကိုယ်ချင်းမစာတဲ့ အမျိုးသားတွေ အတွက်ပါ။ ခိုးလဲ မရိုက်ကြပါနဲ့ …။ကိုယ့်ကို ချစ်လို့ အလိုလိုက်ထားတဲ့သူကိုလဲ မျက်နှာလွဲ ခဲပစ် မလုပ်သင့်ပါ။
ဇတ်လမ်းအသစ်တင်ချင်တယ်ဆိုရင်လဲ ကြေးစားအဆင့်ထဲမှာ အရိုက်ခံတဲ့ သူတွေ ရှိပါတယ်။သူတို့ နဲ့ လှုပ်ရှားပေါ့။ နောက်ဆုံးအဆင့် မျက်နှာလေးဖျက်ပေးတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်တော့ မဖြစ်မနေလုပ်ပေးကြပါ။
အင်တာနက်ဆိုတာဟာ လူ့အကျိုးသယ်ပိုးဖို့ ပေါ်ပေါက်လာတာပါ။ ဒါကို အကျိုးမရှိတဲ့ နေရာမှာ သူများအကျိုးထိခိုက်အောင် မလုပ်ကြပါနဲ့။
(ဒါက sex website တွေကို မကြည့်ပါနဲ့လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါ။ တော်ကြာ ကိုကိုတို့က စိတ်ဆိုးနေဦးမယ်။ အမျိုးကောင်းသမိးများ ကို ညှာတာဖို့ ပြောတာပါ။ နာမည်ကြီးချင်လို့တို့ ၊ ၀ါသနာအရတို့ ဆိုတဲ့ photo တွေ ဗီဒီယိုတွေ ဆိုရင်တော့ ရောင်းသူ ၀ယ်သူ အသံတူရင် ပြီးတာပါပဲဗျာ။)
forward mail မှ့ ရတာလေကို တင်ပြပေးတာပါ။
Posted by မိုးယံ at 11:02 AM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
တကယ့်ကို သတိထားစရာ ကောင်းတဲ့ အချက်တွေပါ။
FW MAIL ထဲက ပုံက တော်တော့ကိုရင်နာဖို့ ကောင်းတယ်.. သနပ်ခါးပါးကွက်နဲ့ ထမီနဲ့...
မြန်မာမဟုတ်တဲ့ သူတွေခိုးရိုက်၊ ပေါ်တင်ရိုက်ပီး တင်တယ်ထင်ပါတယ်ရှင်..
မကောင်းတဲ့ဖက်ကို သတိထားသလို ကောင်းအောင်သုံးတတ်ရင်လည်း အသုံးဝင်တာတွေ ရှိတာတွေ့မိတယ်။
သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒ်နေမြို့က ကျောင်းသူမလေးတစ်ယောက် သူစိတ်ကူးရတာလေးတွေကို အာဝဇ္ဇန်းကောင်းကောင်းနဲ့ youtube video လုပ်ပြီး တစ်လကို ၅-၆ ခုလောက်တင်တယ်ဆိုပဲ။ ဗီဒီယိုတိုင်းမှာ ကြော်ငြာလေးတွေ ကပ်ပေးထားတာ လာကြည့်တဲ့သူက သိန်းကဏန်းကျော်ရှိတော့ လစဉ်ကော်မရှင်ကနေ ဝင်ငွေဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ကျော် ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဆေးနဲ့ ဘေးကို သတိထားတော့ သုံးရမှာပါပဲ။ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်မယူသူတွေနဲ့ အခြားသူတွေရဲ့ တန်ဖိုးကို အလေးမထားသူတွေ အမြဲရှိနေမှာမို့ ကြွက်နဲ့ကြောင်ဇာတ်လမ်းလို အချိန်အတော်ကြာ ဆက်သွားနေကြရဦးမှာ သေချာပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး ရောက်ဖူးတာပဲ သဘောကျတယ် စာရေးသူရဲ့ စေတနာ ပေါ်လွင်စေတဲ့ စာလေး...။ လင့်ခ်ယူသွားတယ်နော် :)
တချို့က ဒါဆို ပိုနာမည်ကြီးတယ် ဆိုပြီး ဂုဏ်တောင်မှ ယူနေကြသေး ဆိုပဲ....
မှန်ပါ့ ..သတိထားသင့်တဲ့ အချက်တွေပဲ ..
Thanks for sharing above article that give me knowledge.
ကောင်းတယ်။အဲလိုရေးပေးတာ အားလုံးအတွက် ကောင်းသလို အားလုံးကိုယ်စား ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲလိုမဖြစ် ဘို့ ကိုယ့်နီးစပ်သူတွေကိုတော့ သတိပေးတာဘဲ။ လိုက်နာရင်တော့ သူတို့အတွက်ပေါ့။ခုလို စေတနာရှေတန်းထားပြီး တင်ပြလို့ စေတနာ အကျိုးပြန်ခံစားရပါစေနော်။
အခုမှ ဖတ်ဖြစ်တယ် မောင်လေးရေ..
ဓာတ်ပုံဝါသနာပါလို့ အလှရိုက်ပြီး အမရဲ့ဆိုဒ်မှာ တင်ထားတဲ့ပုံတွေကို ကူးယူလို့မရအောင်လုပ်ထားပေမဲ့ ဓာတ်ပုံကို ဓာတ်ပုံပြန်ရိုက်ပြီး နာမည်ဖျက်နေတဲ့သူတောင်ရှိသေးတယ်...။